Kuthunyelwe ngu: Admi1ku: December 31, 2018 16: 22 Awekho amazwana
Izakhamizi ngokwabo zihlelele ukuvotela, ngokuyisimangaliso, ukufakazela ukuthi lesi silinganiso sasingenangqondo futhi ukuthi kunokuba siwaphuce ukhetho lomongameli.
Ngokufanayo, eKinshasa lapho amanye amahhovisi avule khona isikhathi esincane kakhulu, ashintshe ucingo lwakhe ngokufanele. Ngokufanayo, maint futhi abaningi endaweni lapho nobunzima yenhlangano sakhungathekiswa intando baseCongo, ukukhathazeka ungalahlekelwa leli thuba lokuba ngikhulume zokugcina.
Imiphumela eyaqala ukuwela yonke indawo, imizuzu yokuvota komphakathi kweziteshi zokuvotela ezitholwa ngezithombe futhi zabelwana ngazo ekuxhumaneni nomphakathi zishiya kungekho ndawo yokungabaza. Ivoti, okuyinto senzeke ngeSonto Disemba 30 2018 wabona ekuchithweni cishe ephelele ihlengethwa-ikhandidethi uJoseph Kabila, ogama umkhankaso ubungekona lokho okwakulindelwe, ogama lakhe yaqhubeka ingaziwa e press international okuyinto kuphela echaza ngokuthi yonke into ephindaphindiwe ngokuphindaphindiwe: "ihlengethwa laseKabila". Kodwa-ke, e-Afrika, njengoba yonke indawo emhlabeni, akusihle kakhulu ukuba ihlengethwa. Abantu bathanda ukuzikhethela ababaqondisayo.
Owinile yokhetho ngaphandle kokungabaza Martin Fayulu, okuyinto cishe kuholela kuzo zonke poll, ngokuvamile ngqo, ngaphandle ezindaweni ezimbalwa eziqondile lapho uFélix Tshisekedi, indodana ka-Etienne igama elifanayo, kugcinwe ukuqhuma.
Ngeke kwenzeke ukuthi Electoral Commission azongenela ukhetho Martin Fayulu ukuthi kwaba ngisho ebanzi kuka ukuthembile, okuyinto kwakulandelwa ekuchithweni wangempela ikhandidethi zikahulumeni, "ihlengethwa" Kabila .
Electron-DRC, "Shadary yena umengameli okhethiwe" Lomuntfu Evamile Front for Congo (FCC) Emmanuel Ramazani ngokushesha wamemezela okhethelwe ukuba nguMongameli we-DRC emva ukuvota ngeSonto Disemba 30 2018 ekuseni ukuze Kinshasa ... (VIDEO)
Ukuphila kukaMarcus Garvey: uma abanye behlekisa ngawe, bahlekise ngabo ngokuphindaphindiwe, uma bekuhlabelela babuyela ekuncoma amandla afanayo